Ukuzivocavoca kwe-5 yobuso kwe-Yoga ukuqina, Ithoni nokukwenza ukhanye
Isebenza kanjani? Njenganoma yikuphi ukujima, ukusebenzisa imisipha yakho kukhulisa ithoni ngokuhamba kwesikhathi. Kuyafana ne-yoga yobuso! Futhi njengoba kunemikhuba eminingi yokunakekela isikhumba engangenisi (njenge-gua sha, i-lymphatic massage, noma i-jade rolling) ngumdlalo omude, onemiphumela emihle kakhulu showi ...
I-Yoga inciphisa izimpawu ezicindezelayo kubantu abanezinye izinkinga zempilo yengqondo
Abaphenyi bathole ukuthi umkhuba we-yoga ungasiza labo abanezinkinga zempilo yengqondo ngokunciphisa izimpawu zokudangala ngempumelelo. Ucwaningo lwabo olunesihloko esithi, "Imiphumela ye-yoga kwizimpawu zokucindezeleka kubantu abanenkinga yengqondo: ukubuyekezwa okuhlelekile nokuhlaziywa kwemeta," bekuyi-publishe ...
I-Yoga - ukuzijwayeza ngokuqikelela ukuthola izinzuzo ezinkulu nokulimala okuncane kusho abacwaningi
Ngokuya ngocwaningo olusha oluvela kubacwaningi base-University of Sydney, ukuzijwayeza kweYoga kungenza okubi kunokuhle kwabanye ababambiqhaza. I-Yoga ifomu lasendulo laseNdiya lokuzijwayeza ngokomoya okubandakanya uchungechunge lokuma komzimba, izindlela zokuphefumula ezijulile nokulinganisela kwengqondo nomzimba. I-st ...
I-Yoga inikeza izinzuzo ezihlukile ngaphandle kokulwa nokukhathala kwabesifazane abanomdlavuza webele
Kwabesifazane abanomdlavuza webele abelashwa ngemisebe, i-yoga inikeza izinzuzo ezihlukile ngaphandle kokulwa nokukhathala, ngokusho kocwaningo olusha oluvela e-The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Ngenkathi izivivinyo ezilula zokwelula zithuthukisa ukukhathala, iziguli ezibambe iqhaza kwi-yoga ezibandakanya ...
Amathiphu wokuzijwayeza ashisayo we-yoga
I-Yoga ingenye yezindlela ezishisa kakhulu zokuqina komzimba futhi isitayela esaziwa nge- “hot yoga” siyanda ngokuthandwa. I-yoga eshisayo isho i-yoga eyenziwa endaweni evuthayo, izinga lokushisa ekamelweni ngokuvamile lifinyelela kuma-degree angama-90 kuye kwangama-105. Umbono osemuva kwawo ukuthi i-yoga eshisayo isiza umzimba ukujuluka ...
I-Yoga ingasiza ekuthuthukiseni ikhwalithi yempilo ezigulini ezinomdlavuza wezingane, isifundo siveza
Izinga lempilo yeziguli ezenza i-yoga lithuthukile, ngokusho kweziphetho ze- “Results of a Pilot Yoga Intervention to Improveatric Cancer Patients 'Quality of Life and Physical Activity and Parents' Well-being”. Lolu cwaningo, olushicilelwe kushicilelo lukaJanuwari 2017 lwe- "Rehabilitation Onc ...
I-Yoga ingasiza ekuvikeleni izinkinga zempilo yengqondo kubafundi besikole samabanga aphezulu
Amakilasi e-Yoga anemiphumela emihle yezengqondo kubafundi bezikole zamabanga aphakeme, ngokusho kocwaningo lomshayeli ku-Ephreli Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, iphephabhuku elisemthethweni le-Society for Developmental and Behavioural Pediatrics. Iphephabhuku lishicilelwa nguLippincott William ...
I-Yoga ibonakala inciphisa izimpawu zokudangala
Uhlobo lwemithi lwamasonto amaningi lungaba umphelelisi osebenzayo ekwelashweni kwendabuko, ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi Abantu abahlushwa ukudangala bangafuna ukubheka i-yoga njengomphelelisi wokwelashwa kwendabuko njengoba umkhuba ubonakala unciphisa izimpawu zalesi sifo, ngokusho kocwaningo olwenziwe ...
I-Yoga ejwayelekile inciphisa ubuhlungu obungapheli obuya emuva: Ukutadisha
Ucwaningo olusha luthole ukuthi labo abanezinhlungu ezingapheli emuva bangazuza kwi-yoga ejwayelekile. Izinyanga ezintathu zamakilasi e-yoga amasonto onke zidambise izinhlungu emuva kunenkambo ejwayelekile yokunakekelwa - incwajana efundisayo yezinhlungu emuva emuva ithe abacwaningi. Ngisho nonyaka kamuva, iziguli ezinezinhlungu ezingapheli emuva ezazibambe iqhaza ...
Ukuzivocavoca nge-Yoga nokuphefumula kunomthelela omuhle ezinganeni ezine-ADHD
Ukuzivocavoca nge-Yoga nokuphefumula kunomphumela omuhle ezinganeni ezinenkinga yokunganakekelwa (ADHD). Ngemuva kwamakilasi akhethekile, izingane zithuthukisa ukunaka kwazo, zinciphisa ukungasebenzi kahle, azidinwa isikhathi eside, zingahlanganyela emisebenzini eyinkimbinkimbi isikhathi eside. Lesi yisiphetho ...